အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု 24 အောက်တိုဘာလရင်ပြင် Utrecht တစ်ဦးထိတ်လန့်သို့တစ်နိုင်ငံလုံး! မာတင် Vrijland
အတွက် Filed NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	by မာတင် Vrijland	မတ်လ 18 2019 အပေါ်	• 35 မှတ်ချက်
ဤသည်နံနက် Utrecht အတွက်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ရှိပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့နေဆဲကျွန်တော် bombastic ပုံပြင်များကိုဖတ်ရှုကြောင်း မှလွဲ. ဘာမှသိကြနားမထောင်ခြင်းနှင့်မီဒီယာများတွင်ကြည့်ပါ။ ယင်းအပေါ်လမ်းရထားပေါ်တွင်ပစ်သတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း 24 အောက်တိုဘာလရင်ပြင်မှာ။ ပြီးသား Utrecht အတွက် Truman ရိပ်သာလမ်းတခုတခုအပေါ်မှာတိုက်ခန်းပေါ်မှဝင်ရောက်စီးနင်းရှိခဲ့သည်လိမ့်မယ်။ 1 ပြစ်မှုကျူးလွန်သူတည်ရှိဖို့ရှိပါတယ်ပုံရသည်။ ထို့အပြင်4ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ၏ပုံပြင်များရှိလိမ့်မည်။ ရဲတစ်ဦးအနီရောင် Renault Clio ရှာတွေ့လိမ့်မယ်။ ရဲတပ်ဖွဲ့ထိခိုက်သေဆုံးမှုနှင့် ပတ်သက်. ဘာမှမပြောလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်အရေးပေါ်ဆေးရုံသို့ယူဆောင်ထိခိုက်သေဆုံးမှုရှိခဲ့သည်။ ဒီတော့ဇာတ်လမ်းပိုကြီးနှင့် fuzzier လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအားလုံးအလွန်လေးနက်ခြင်းနှင့်လေးနက်သောအသံ, ဒါပေမယ့်ကြောင်းဖြစ်ကောင်းရည်ရွယ်ချက်ကိုဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာကျိကျိတက်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပြီးကျနော်တို့ဒါမှာအနည်းဆုံးကအကြမ်းဖက်ဝါဒနေဆဲရှိကွောငျးခံစားခဲ့ရကြောင်းကိုယ့်အချိန်မရွေးဘယ်နေရာမှာမဆိုအသုံးပြုနိုင်မရ။ ကျနော်တို့မှန်မှန် site ပေါ်တွင်ဒီမှာပြခဲ့ကြသကဲ့သို့ငါတို့ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, greenscreen နည်းလမ်းများကိုစဉ်းစားများနှင့်တိုက်ရိုက်တင်ဆက်မှုကိုမထီမဲ့မြင်မပြုပါဘူး Pegida-Antifa ဆန္ဒပြပွဲများ ဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံး Zaandam vloggersrel (အပြည့်အဝမြင်ကွင်းတစ်ခုအတွက်ထား) ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သလိုပဲမီဒီယာစိုးရိမ်ထိတ်လန်နှင့်လူရဲက်ဘ်ဆိုက်မှမဆိုပုံရိပ်တွေ upload ရန်ဖိတ်ခေါ်နေကြသည်။ သင်တန်း၏ယုံကြည်ကိုးစားမှုများ၏ပုံရိပ်ကိုဖို့ကိုအလွန်စေတယ်။ ဘယ်သူမှပါဝင်သူများ၏အပ်လုဒ်တင်ထားသောပုံများပါတဲ့ PSYOP (စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆင်ရေး) သို့မဟုတ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရုံဆော့ဖ်ဝဲအားဖွငျ့အတူတကွနှိပ်ပါဖြစ်နိုင်ပါတယ်လျှင်တောင်းအံ့ဩကြ၏။
ဒရာမာကျောင်းများနှင့်ပြည့်ဝ၏တိုင်းပြည်နှင့် Inoffizieller Mitarbeiter သင်တည်နေရာတစ်ခုအတွက်မြင်ကွင်းတစ်ခုမှရပ်တန့်စေအထူးသဖြင့်လျှင်များသောအားဖြင့်လူတွေအများကြီးမရ, ကြီးသောမြင်ကွင်းတစ်ခုသို့ထိုအခွအေနမြေားကိုဖွင့်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလယ်ပြင်ကိုချွတ်နေတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ထယ်သရုပ်ဆောင်တွေက၎င်း၏အလုပ်ကိုလုပ်ပါ။ ဒါကြောင့်အများအားဖြင့်အခွခေံမူသောကွောငျ့ငါ ', ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေများ၌ကြီးသောသံသယရှိပြဿနာ, တုံ့ပြန်မှု, ဖြေရှင်းချက်"အပြည့်အဝအကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြဿနာတစ်ခုအခွအေနများကိုပေးစွမ်းတုံ့ပြန်မှုမီဒီယာ excite (အဓိကအားဖြင့်လူများတို့ကိုစိတ်လှုပ်ရှားမှုအပေါ်ကစားခြင်း) နှင့်ထို့နောက်သင်တစ်ဦးခင်မင်ရင်းနှီး layout ကိုပိုမို '' ရဲတပ်ဖွဲ့ပြည်နယ်မိတ်ဆက်ဖြေရှင်းချက်ဝတ်ဆင်။
ကျနော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ပုံရိပ်တွေမြင်လိမ့်မည်နှင့်ကျနော်တို့အတွေ့အကြုံကတစ်လူဖမ်းပွဲကြီးပြုလုပ်နေတည်ထောင်ရန်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဤ (မြင်ဝေးညာဘက်ထောင့်ကနေဆန့်ကျင်တူရကီငါ့အားဖြင့်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်ကြောက်မက်ဘွယ်သောအ၏အချုပ်အခြာဖြစ်၏ ဤဆောင်းပါးတွင်) ။ ဤအတောအတွင်းတကယ်တော့တစ်ဦး 37 တစ်နှစ်Gökman Tanis အမည်ရှိဟောင်းတူရကီလူကိုအစီရင်ခံထားသည်။ ကျနော်တို့အဲဒီမှာကျနော် (နယူးဇီလန်အတွက်တိုက်ခိုက်မှုနှင့် ပတ်သက်. ) ဆောင်းပါးထဲမှာ FETO link ကိုအစီရင်ခံသောအမြင် go? FETO ထိုကဲ့သို့သောတူရကီတို့ကသတ်မှတ်ရှိသူများသည်အတိုင်း, Gülenကြောက်မက်ဘွယ်သောအအုပ်စုကိုဖြစ်ပါတယ်။
လူများ၏အများစုဆံ့မယုံကြည်ပါလိမ့်မယ်မဟုတ်သလိုကြောင်း (စသည်တို့ကိုရဲနှင့်မီဒီယာ, ပြဇာတ်ရုံအစီအစဉ်များနှင့် Inofizieller Mitarbeiter, အပါအဝင်) အမျိုးမျိုးသောအေဂျင်စီများနှင့်ပူးပေါင်းအစိုးရများထားထိုကဲ့သို့သောကြောက်မက်ဘွယ်သောအမြင်ကွင်းတစ်ခုနိုင်စွမ်းဖြစ်လိမ့်မည်။ လူတွေနေဆဲ (Utrecht အတွက် Truman ဤအခြေအနေတွင်အတွက်အလွန်သက်ဆိုင်သောဖြစ်ပါတယ်) ကို Truman Show ကိုမီဒီယာကိုယုံလို့ပါပဲ။ အနည်းငယ် site ပေါ်တွင်ကဒီမှာခက်ခဲတဲ့ image ကိုယူဆောင်သောဆန္ဒပြအခြေအနေများမှတ်ချက်ချကြသည်။ ပြည်သူ့မဟုတ်နိုင်နှင့်တစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားပန်းတိုင်၏ငာအောက်မှာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်လဲလှယ်ခြင်း, ပိုက်ဆံတစ်အိတ်အတွက်ကြိတ်ယူအစိုးရများ, သူချင်းနိုင်ငံသားများနှင့်မီဒီယာဖြစ်ကြောင်းတတ်နိုင်သောအရာတို့ကိုမယုံကြည်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါလူမှုမီဒီယာ trolls စစ်တပ်, တိုက်ခိုက်ဆွဲဆောင်ရန်မည်သူမဆိုရဲ့အမှုမေးခွန်းထုတ်ဝံ့များအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလိုချင်သောဖိအားအုပ်စုတစ်စုသည်။
အဘယ်အရာကိုအရင်းအမြစ်များကိုမင်းသမီးနှင့်လူကြီးလူကောင်းရှိသည်? သငျသညျ AI အ software ကိုဖန်တီးခြင်းအားဖြင့်ခြစ်ရာကနေလူပုဂ္ဂိုလ်များပါဝင်သည်ဟုဥပမာမဟုတ်နိုင်။
သငျသညျသရုပ်ဆောင်များကိုငှားရမ်းနိုင်ပြီးထိုကဲ့သို့ရဲ, ဆေးရုံနှင့်မီဒီယာအဖြစ်အဖွဲ့အစည်းများအတွင်းသရုပ်ဆောင်ပါဝင်လူတွေကိုအန္တရာယ်ပြုပါပြီ။ ထိုသို့သောအမှုကိုအဘယ်သူလုပျမလဲ သင်တစ်ဦးဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်အကြာ, ထိုဝါဒဖြန့်စက်များအတွက်တာဝန်များကိုအမျိုးမျိုးအပေါ်ဖျော်ဖြေမည်မျှကျွန်တော်တို့ရဲ့အရှေ့ပိုင်းအိမ်နီးချင်းများရှိလူများသိ? နေသမျှကာလပတ်လုံးလူတွေကိုပေးဆောင်ရနှင့်အဆင့်မြင့်သွားပါလေစေသကဲ့သို့, ဘောင်းဘီပြင်ပကမ္ဘာမှအမှုအရာနဲ့သူတို့ရဲ့ပါးစပ်စောင့်ရှောက်ပါစေသူအများအပြားရှိပါတယ်။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်သင်ကောင်းစွာသမိုင်းကိုလေ့လာကြပြီမဟုတ်, ထိုမယုံကြည်ပါနှင့်။ သငျသညျဖြစ်ကောင်းကွောကျရှံ့ခွငျးသည်ကောင်းကိုစောင့်ရှောက်ရန်မီဒီယာပြပွဲနှင့်အတူကစားပါလိမ့်မယ်, ဒါကြောင့်ရဲကိုပြည်နယ်နောက်ထပ်ပုံသဏ္ဍာန်ပေးနိုငျသညျ။
တစ်ခုစွပ်စွဲချက် "မျက်မြင်သက်သေ" ၏တစ်ဦးကထူးခြားတဲ့လေ့လာ ကွေးနနျးစကျ အမည်ရှိ Koster နေဆဲထူးခြားတဲ့တစ်ခုခု said:
Sexton: "ကဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်အခါ, ငါလွှတ်ငါ၏အမှုကနေရောက်လာတယ်။ ငါသူတို့အသက် 24 နှင့် 20 နှစ်အကြားနေကြသည်ထင်, ငါ 35 အောက်တိုဘာလရင်ပြင်ပေါ်တွင်ယာဉ်အသွားအလာအလင်းအိမ်မှာရပ်နေတယ်နဲ့ကျွန်မအမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုကြည့်ပါ။ ကြောင်းယခုအချိန်တွင်ငါသုံးကြိမ် Pang Pang Pang ကြား၏။ လူလေးယောက်သူမ၏ဆီသို့ဦးတည်အလွန်ခက်ခဲခဲ့ကြခြင်းနှင့်ကွာသူမ၏ဆွဲယူဖို့ကြိုးစားပြီးတော့ကိုယ့်အခြား Pang Pang Pang နှင့်ဧည့်သည်များကြောင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးကိုထပ်သွားကြကုန်အံ့ကြား၏။ အဲဒီမှာအားလုံးပရမ်းပတာ။ "
ကပစ်သတ်ခံခဲ့ရသည်လာသောအခါထိုမိန်းမသည်ရှိခဲ့သလဲ ထူးဆန်း။ အိုးသင်သည်အဘယ်အရာကိုငါသိ၏။ ဒါဟာကျနော်တို့ကိုပိုပြီးပုံပြင်များအရကိုနားထောငျပါမညျအခြားဇာတ်လမ်းပါပဲ။ အဆိုပါ Truman Show ကိုသွားရမယ်:
(ကိုလည်းဖတ်ပါ ယခင်ဆောင်းပါးများခဏနယူးဇီလန်အတွက်တိုက်ခိုက်မှုနှင့် ပတ်သက်. ဌကြောက်မက်ဘွယ်သောအများ၏လက်ရှိလှိုင်းပိုပြီးနားလည်မှု)
source link ကို entries တွေကို: telegraaf.nl, indebuurt.nl
Tags:: 24, 37, တို့, ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ, အထူးပြုလုပ်ထားသော, Fethullah, FETO, ကြားသိ, သကျသခေံ, Gokman Tanis, ရယ်မော, ခုနှစ်, လူကို, oktoberplein, schoten, ကြောက်မက်ဘွယ်သောအ, အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှု, အကြမ်းဘက်ဝါဒ, ဓါတ်ရထား, Truman ရိပ်သာလမ်း, တူရကီ, Utrecht
18 မှမတ်လ 2019 14: 23
ငါသည်သင်တို့ကို numerology ဖို့တစ်ခုခုရှိကိုငါသိ၏။
18 မှမတ်လ 2019 15: 33
Harry S. Truman အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ 33rd နိုင်ငံတော်သမ္မတအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူတစ်ဦးအမေရိကန်နိုငျငံရေးခဲ့
18 မှမတ်လ 2019 18: 04
33e ဒီဂရီတစ်ခုကိုမတ်လများ၏ Ides ကျနော်တို့ကအထွတ်အထိပ်မြျှောလငျ့နိုငျရှိမရှိ losgebarsten..eens 22e ရှာဖွေနေအပြည့်အဝတပ်ဖွဲ့အတွက်ညှိနှိုင်းကြောင်းပုံရသည်။
18 မှမတ်လ 2019 14: 54
18 မှမတ်လ 2019 14: 58
"မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆို, အဘယ်ကြောင့်အောက်တိုဘာလရက်စွဲ 24 ပြီးနောက်အမည်ရှိစတုရန်းပါသလဲ တစ်ခါတစ်ရံတွင်ထိုနေ့ရက်သည်ဖြစ်ပျက်အထူးတစ်ခုခုရှိသလဲ? ဟုတ်ကဲ့! အောက်တိုဘာလ 24 1945 တွင်, 73 နှစ်ပေါင်းအတိအကျယနေ့လွန်ခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ ယခုပင်လျှင်စစ်ပွဲစိတ်ကူးများစဉ်အတွင်းနိုင်ငံတွေရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေး, လုံခြုံရေးနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးလိုက်စားတဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းကဖွဲ့စည်းခဲ့ခဲ့ကြသည်။ မကြာမီတွင်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်အောက်တိုဘာလ 24 1945 အပေါ်, ကဒါဝေးခဲ့: ကုလသမဂ္ဂတစ်ဦးအချက်ကိုခဲ့သည် "။
နှင့်သင်တန်း၏, ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာမဆိုပုံရိပ်တွေအပေါ်ရဲထားရန်တောင်းဆိုထားသည်: ဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှုများအတွက်စှပျစှဲမှနျကနျကွောငျးရာခခြေကျြပြီးသားအလောင်းတော်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
18 မှမတ်လ 2019 15: 19
18 မှမတ်လ 2019 15: 22
ငါအဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုဒါအံ့သြစရာကတိုင်းနေအိမ်ကျူးကျော်မှာအားလုံးမေလကင်မရာသမားတွေပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်မည်အကြောင်းဘယ်လောက်ပါသလဲ အကြမ်းဖက်လှုပ်ရှားမှုတခုအတွင်းအပြည့်အဝပွင့်လင်းပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကင်နာအကြမ်းဖက်သမားတွေကိုလည်းကောင်းသောမှတလျှောက်နားမထောငျနိုငျအောငျ? ဒါမှမဟုတ်အစွန်အဖျားများ၏မင်းသမီးနှင့်လူကြီးလူကောင်း get? "ကျွန်တော်တစ်ဦး invalletje လုပ်ပေးသွားပါအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် Huppelepup Avenue ထံသို့လာကွ"
အရာအားလုံးကိုတစ် PSYOP ဖော်ပြသည်။
18 မှမတ်လ 2019 15: 36
သငျသညျယနေ့သပိတ်နဲ့ connection ကိုတွေ့မြင်ပါသလား သတင်းလုံးဝအောက်မှာ snowed ကြောင့်လည်းတိုက်ဆိုင်မှုရှာရန် ... ဒါမှမဟုတ်သူတို့ဤကိစ္စတွင်အတွက်သပိတ်အသုံးပွုနိုငျသနညျး
18 မှမတ်လ 2019 16: 06
အမ်စတာဒမ်အတွက်သပိတ်ကိုအနည်းဆုံး Utrecht အတွက်ပေါ်လာတာဟာအရင်ပုံမှန်အတိုင်းထက်လျော့နည်းလူစည်ကားခဲ့ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်
18 မှမတ်လ 2019 16: 13
ယခုတွင်ငါသည်ကြောင့်လည်း Utrecht အတွက်တနိုင်ငံလုံးသပိတ်, ဖွစျကွောငျးကွညျ့ပါ။
18 မှမတ်လ 2019 16: 14
ကျွန်တော်တစ်ဦးကောင်းမွန်စွာစီစဉ်ထား PSYOP နှင့်ဆက်ဆံရာတွင်ဖြစ်ကြောင်းနောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အချက်ပြမှုရှိသည်။
18 မှမတ်လ 2019 16: 36
အထူးသကအကြီးမားဆုံးသပိတ်ရုံဒီ "tereur" လုပ်ရပ်များ၏နေ့၌ရာအရပ်ကိုယူမတိုက်ဆိုင်မှုရှိနိုင်ပါသည်။
18 မှမတ်လ 2019 18: 09
ဌာနချုပ် (တစ်ပိုင်း) အစိုးရမဟုတ်သော NS Utrecht ကျနော်တို့ Utrecht တက္ကသိုလ်ကအများကြီးဒီဝန်ထမ်းကိုတွေ့မြင်သွားနေယနေ့ညတွင်တည်ရှိသည်
18 မှမတ်လ 2019 18: 55
18 မှမတ်လ 2019 16: 15
မော်တော်ကားသမားအကြားနားကြားအများအပြားကလူရိုက်ချက်များကြေညာမဟုတ်သော်လည်းခေါက် Witness ၏ပုံပြင်များ။
ပြီးတော့ဘန်ဝစ်အပေါ်ပယ်ချဒီ "သရုပ်ဆောင်" .. အဆိုပါရိုက်ချက်များတော်တော်တုံးတံပိုးမှုတ်သောအခါ, Utrechter ပြောပြသည်။ "ကျွန်မနေတဲ့တိတ်ဆိတ်အပေါ်ရှိခဲ့သည်ထင်ပါတယ်။ အဲဒီအစားအသံကျယ် Bang ၏, ငါ pofpofpof ကြား၏။ "အမ်းဒေသ၏အဆိုအရထိုမိန်းမသည်တစ်ဦးတမင်တိုက်ခိုက်တူ။
ချောမောမျိုးစုံယာဉ်မောင်းတစ်ဦးတိတ်ဆိတ်နှင့်အတူ၎င်းတို့၏မော်တော်ကားတစ်စုံတစ်ဦးအတွက်ဆူညံသံ၏အတော်လေးတွေအများကြီးနဲ့အဝိုင်းမှာရိုက်ကူးစကားကိုနားထောငျ ... ..
18 မှမတ်လ 2019 16: 45
"Utrecht ၏စီးတီးလူတွေအိမ်တွင်းနေဖို့အစောပိုင်းကအကွံဉာဏျကိုပေးတော်မူ၏။ Zanen: ငါတို့သည်ကြောင်းအဖြစ်အပျက်ပေါင်းများစွာသောနေရာများအတွက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကြလိမ့်မည်ဟုတစ်ဦးသေနတ်ပစ်ဖြစ်ပါတယ်ယူဆသောကွောငျ့ "ကျနော်တို့ကအမှုကိုပြု၏။ အဲဒီအဖြစ်ဝေးယခုကြှနျုပျတို့သိကြသကဲ့သို့, အမှုမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ခုမှာတရားခံသူအထဲမှာနေတုန်းပဲဖြစ်ပါသည်, အဲဒီမှာကိုရှာဖွေသည်အမြင်၌တည်ရှိ၏။ ငါတို့သည်လည်းယခုအထိတော့မဟုတ်ပါဘူးငါသိ၏အများအပြားသံသယရှိသူရှိပါတယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ "
ကျွန်မကင်မရာကယ့်ကိုအပြည့်အဝဟာပေါ်လာတာဟာအရင်ဆွဲထားဒီတော့ဒီမရေပစ္စည်းပစ္စယများနှင့် PSYOP ၏အခြားအရိပ်အယောင်ဖြစ်ပါတယ်ထင်ပါတယ်။
18 မှမတ်လ 2019 17: 00
Update ကို 16.24: သက်သေလမ်းရထားပေါ်မှာမီးမဖွင့်မီ "Allahu Akbar" ဟုအဆိုပါသေနတ်သမားတောင်းဆိုခဲ့သည်။ အဘိဓါန် Moroccan ခေါ်တော်မူသောတစ်ဦးကခရီးသည် Het Parool သည်နှင့်အညီ, တယောက်တည်းကျန်ရစ်သောခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ထူထောင်နိုင်ရန်ပထမဦးဆုံးမဟုတ်ပါအစ္စလာမ်ဘာသာနှင့်အတူကအားလုံးကိုလုပ်သူကအလေးပေးတဲ့သူတွေးမိ။
ပြည်နယ် xander သတင်း
18 မှမတ်လ 2019 17: 18
ရုံလြှို့ဝှကျစကားအပြီး link ကိုကြည့်ရှုပါ။ တကယ်ပဲဝိုးတဝါးပုံပြင်။ သကျသခေံ ... ရှည်လျားလက်နက်နှင့်သေနတ်နှင့်အတူ4ပြစ်မှုကျူးလွန်သူစကားပြော .. ဒါပေမဲ့သူတို့စိတျထဲမှာ 1 သံသယရှိသူရှိ
18 မှမတ်လ 2019 17: 20
ငါနားမလည်ဘူးသကဲ့သို့ငါ့ကိုကူညီပါ။ လုပ်ဖို့ '' အကြမ်းဖက်ဝါဒ '' နှင့်အတူဖြစ်ပျက်ကြလိမ့်မည်ဟုအဘယျသို့ဖေါ်ပြသည်? အဘယ်ကြောင့်မပေးရာဇဝတ်ဂိုဏ်းသို့မဟုတ် fanilheperikelen နှင့်အတူ?
18 မှမတ်လ 2019 18: 54
ငါပြစ်မှုကျူးလွန်သူဂုဏ်အသရေ-related ကိစ္စများများအတွက်ဖမ်းမိကြောင်းနားလည်ပါသည်။ "အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုမုဆိုးတစ်ဦးသည်ခြင်္သေ့ဖမ်းရန်ထွက်သွားကြ၏နှင့်မောက်စ်ကိုမြင်တော်မူ၏။ ဟော်လန်အတွက်ကြောက်လန့် porn ။ အဆိုပါ fimscript Be နှင့်ဟောလိဝုဒ်မှပြုလုပ်ရောင်းချ။ အဘယ်အရာကိုတိုင်းပြည်။
Hollandia အတွက်ကြောက်လန့် porn ။
18 မှမတ်လ 2019 18: 15
သူတို့ခဲ contents တွေကိုရယ်မောနိုင်သည့် Rutte ။ မကောင်းတဲ့အဘယျသို့
ရုံ fcking ကျည်ဆံတွင်းမြို့ရိုးပေါ်မှာအသွေးသောနံရံ၌ရှိကြ၏ဘယ်မှာ Newzealand အတွက်သရုပ်ဆောင် ... တူသော ....
18 မှမတ်လ 2019 20: 57
Mister la Wolfenstein 3D..en ယခု yeah အင်တာနက်ထဲကနေပုံများအားလုံးကိုဖယ်ရှားပေးàကျူးကျော်မရောက်မှီသေလွန်သောသူတို့သည်မြေပြင်ပေါ်တွင်ပြီးသားခဲ့ကြသည်
18 မှမတ်လ 2019 18: 22
ရွေးကောက်ပွဲအကြီးအထိတ်တလန်နှင့်သိသာ FVD ကြီးတွေဆုရှင် nodig..staatsgecontroleerde ကောင်းတစ်ဦးသည်သိုးထိန်းတို့ကိုရှေ့တော်၌ထိုသိုး?
"ဒီမိုကရေစီိံဖိုရမ် မှလွဲ. အားလုံးနိုင်ငံရေးပါတီများ, ရှေ့ဆက်တိုက်ခိုက်မှုကိုနှင့် ဆက်စပ်. အတွက်ဒေသဆိုင်ရာရွေးကောက်ပွဲများ၏ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးရပ်ဆိုင်း။ "
18 မှမတ်လ 2019 18: 40
ရုတ်တရက်အရင်ကခံစားချက်မျိုးခံစားမှုရယူပါ။ ငါ့ကိုတိတ်တဆိတ်နယ်သာလန်သို့ ဝင်. အဘယ်သူသည်တူရကီကောင်စစ်ဝန်၏မေးခွန်းကို Heriinner ။ အဓိကရုဏ်းစသည်တို့ကိုထိုအခါ Rutte ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ သူကတူရကီဆန့်ကျင် "သွားပါ့မယ်" အရေးယူခဲ့သည်။ အချိန်တစ်ဦးကနှစ်ခုလာကြတယ် Rutte နှင့်အာဒိုဂန်?
18 မှမတ်လ 2019 18: 43
အတိအကျ😀ဒီ Psyop အများအပြားထောင့်ရှိပြီးတစ်ခုဖြစ်သည် ..
18 မှမတ်လ 2019 18: 39
ထို့ကြောင့်စွပ်စွဲခံရသူ PSYOP သရုပ်ဆောင်ဖမ်းမိသည်။ ကောင်းသောအရာတစုံတခုကျနော်တို့နေဆဲထိုကဲ့သို့သောအကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ရှိသည်။ အဘယ်အရာကိုသူတို့ပွုပါပွီက "လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်" မျှမက, "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယောက်ျားလေးများ" ။ ကြောက်ရွံ့အစီအမံချွတ်ပေးဆောင်ကြသည်!
18 မှမတ်လ 2019 18: 50
..The လာမယ့်ခြေလှမ်းသိသာ biometric အစီအမံဖြစ်ပါသည်, ကျနော်တို့၏သင်တန်းငါတို့ဘက်မှာ gaan..Rutte သည်သူ၏မြည်းသည်ရဲဘော် Timmermans ကုမ္ပဏီစောင့်ရှောက်ဖို့ဘရပ်ဆဲလ်မှာရှိတဲ့ပေါ်လစ်ဗြူရိုမှအပေါ်ထပ်ကန်ခံရပါစေလို့မရပါဘူး။ ရဲတပ်ဖွဲ့ပြည်နယ်အတိုင်းအတာအီးယူတို့က installed လျက်ရှိသည်သငျသညျကဲဒါဆိုရင်တော့ 2.0 ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့တစ်ဦးကျက်သရေများကဲ့သို့အလုပ်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမေ့နိုင်အောင်ကနောက်တဖန်ဖြစ်ပျက်ပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ EUROGENDFOR et Frontex အတူ ပူးပေါင်း. အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် ...
18 မှမတ်လ 2019 18: 52
Chris ကလေး wrote:
18 မှမတ်လ 2019 19: 54
တောတွင်းမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်, ပရမ်းပတာခရီးစဉ်လာသေး၏။ အမေရိကန်ဥရောပ၌ဤရက်သတ္တပတ်နျူကလီးယားဗုံးကြဲလေယာဉ်တပ်ဆင်ပြီး, တူရကီနှင့်အတူတင်းမာမှုများဒီနွေရာသီကိုထပ်တိုးမြှင့်ခဲ့ကြပေမည်, အမေရိကန်များအပေါ်ကစာချုပ်ဆေးလိပ်ဖြတ်ခြင်းနှင့်မကြာမီသေးတစ်ခုအီးယူတပ်မတော်ဖြစ်လာဖို့လုံလောက်တဲ့အာဏာကိုပိတ်ပင်ထားဒုံးကျည်များဖွံ့ဖြိုးဤအသစ်သောသူရဲကောင်းများချက်ချင်းအဝါရောင်နိုင် cardigans addressing ။
ထိုမှတပါး, သင်နယူးဇီလန်အတွက်တိုက်ခိုက်မှုများ၏သေနတ်များအပေါ်တိကျမ်းစာ၌လာသည်ကားအဘယ်အရာကိုမြင်ပြီလော သမိုင်းသင်ခန်းစာရာစုနှစ်များစွာအော်တိုမန်အင်ပါယာ vs ဥရောပ
18 မှမတ်လ 2019 21: 02
တစ်ဦးအသုံးဝင်သောလူထုံအဖြစ်ဘရီဗစ်ကိုသုံးသူခါတိုင်းလိုသံသယရှိသူအားဖြင့်လေ့ကျင့်သင်ကြား Tarrant မိတ္တူ-ကြောင်ဘရီဗစ်။ အားလုံးလမ်းတွေကိုတစ် mousetrap ထက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရှာတွေ့ခဲ့သည်ဘယ်မှာ မှလွဲ. ပုံမှန်သံသယရှိသူဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြ။
18 မှမတ်လ 2019 20: 31
ပြင်သစ် 2019, ကမ္ဘာသစ်မိန့်အစီအစဉ်
ဆင်ဆာ / ၎င်းတို့၏အာဏာသော့ချက်ဒါဟုတ်တယ်အရာအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကိုချာလီ Hebdoo ကာလအတွင်းလှောင်ပြောင်သရော်မှုတွေအတု schietpatijen ၏ကြင်နာငါတို့ကဲ့သို့ကောင်းစွာဒီ site ပေါ်တွင်, ထိတွေ့မြေတပြင်လုံးချာလီ Hebdoo ပစ်ခတ်မှုမြင်၏ပိုပြီးသဘာဝအလျောက်, အမျိုးအနွယ်ရှိသည်မဟုတ်နိုင်ပါတယ်ယုံကြည်စေနိုင်ပါတယ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ် အများကြီးဆွေးနွေးကြသည်။
19 မှမတ်လ 2019 11: 15
ယောဟနျသ Maes ကြေးနန်းသင့်ရဲ့ဓာတ်ပုံကို။ ဒီတိုက်ခိုက်မှုဖန်တီးနေတဲ့ဝီကီပီးဒီးယားစာမျက်နှာကိုအတူတူရုပ်ပုံနှင့်အတူတစ်နေ့အတွင်း, အမှန်တကယ်ယခုရှိပါသည်။ ဝီကီသူ၏မူပိုင်အခမဲ့မဟုတ်ပါဘူးဆိုဓာတ်ပုံများတတ်၏။ တိုတိုတှငျကြှနျုပျတို့နယ်သာလန်အိပ်ပျော်နေသောအဆိုပါဝါဒဖြန့်စွယ်စုံကျမ်းမှာလြှို့ဝှကျခန်ဆောင်မှုများနှင့်မီဒီယာများ၏ Huddle ကြည့်ပါ။ ဒီတော့ 100% အချို့အယူမှားအလံ။
Johan ငွေရှင်းကောင်တာတွင် wrote:
19 မှမတ်လ 2019 11: 31
ငါ Folkert, G အတွေးများကိုရယူပါ။
« နယူးဇီလန်ကိုရပ်တန့်အဓိပ္ပာယ်တည်ထောင်ခြင်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှု, လက်နက်ဖျက်သိမ်းရေးနှင့်လူဦးရေ polarization ကို
Gökmen Tanis ကျင်းပသံသယဖြစ်ဖွယ်ကျူးလွန်သူ, ဖြစ်ကောင်းမိသားစုဒရာမာ »